Muore per 10 ore e poi ritorna in vita "vi racconto il Paradiso" | Ilblogdellapreghiera
Ọ na-anwu awa iri, ma ọ dịkwa ndụ ọzọ “Aga m agwa gị gbasara Eluigwe”
Paolo Tescione	Edere ya Maggio 6, 2020 Maggio 6, 2020
Ọ bụ ihe ịtụnanya maka otu ezinaụlọ, dịka nne nwatakịrị dịghachi ndụ mgbe ekwuputara na ọ nwụrụ anwụ awa 10. Aha ya bụ Ksenia Didukh ma ọ nọrọ oge "n'akụkụ nke ọzọ". Ksenia bụ onye Ukraine ma bụrụ afọ 83. Akpọrọ ya nwụrụ n'obodo ya nke Stryzhavka n'izu gara aga.
Nwa nwanyị Ksenia Didukh rịọrọ maka enyemaka mgbe nne ya dara ọrịa. Mgbe obere oge gachara ndị ọrụ enyemaka ahụ bịara kwupụta na ọ nwụrụ na ọnọdụ, ha ji n'aka na ọ nwụrụ. O nweghi oke olu ma obu obi ya.
Ksenia Didukh Ukraine Biri Ndụ
Ndị ikwu na-eru uju ọnwụ nke onye ha hụrụ n'anya n'etiti ndị enyi. Kama nke ahụ, ewegara Ksenia n'ụlọ ọgwụ, o dokwara anya na ọ laghachiri ebe ahụ.
Dịka enwere ike ịghọta, onye ikwu tinye aka ya n'isi Ksenia n'isi. Ha ghọtara ozugbo na mmetụ ha metụrụ ya n'ahụ. O juru onye ọ bụla anya mgbe Ksenia laghachiri n’ụwa a.
O doro anya na ndị dọkịta ndị na-elekọta Ksenia tụrụ ihe mere. Otu n'ime ha kwuru na ọ hụbeghị ụdị ikpe a n'ime afọ iri abụọ. Emechara kpebie na Didukh adabala na mmiri.
Mgbe ndị mmadụ na-aga n'akụkụ nke ọzọ, ha na-akọ na-aga izute na Chineke. Ọtụtụ na-akpọ nke a ịbụ Christ ma ọ bụ Jizọs n'ọtụtụ ọdịnala. Ọtụtụ mmadụ kwenyere na e nwere ụdị ndụ na ndụ mgbe a nwụsịrị na-echere anyị niile. Ikekwe nwanyị a bụ ihe akaebe na-eche anyị karịchaa mgbe anyị gachara njem a.
Ksenia kwuru na mgbe ọ nọ na alaeze nke ọzọ, na o kwuru na n'ezie enwere alaeze nke eluigwe. Ọ nụrụ olu nna nna ya na-agwa ya okwu. Amabeghị ihe kpatara eji akpọghachite ya, mana o kwuru na ikekwe Chukwu meere ya ebere.
A ga-eme ka ala ahụ a ga-eli jupụta ma webata onye nchụàjà ịkasi ezinụlọ ahụ obi ma gaa olili ya. Agbanyeghị, nke a bụ ozi ọma nye ụkọchukwu a. Site na nke gaara abụ obi mgbawa, ọ bụụrụ ezinụlọ a nnukwu mmeri ma ndị mmadụ nwere obi ụtọ ịnụ akụkọ ahụ ebe niile.
Likedị ihe a na-etinye ọtụtụ ihe n'ọnọdụ nke ha. Ndụ dị mkpụmkpụ ma anyị ga-emerịrị ọtụtụ n'ime ya kwa ụbọchị. Gbalịa mee ihe ị ga - eme n’ihi na ị maghị mgbe ụbọchị gị ga - abịa.
← Na post gara aga Gara aga post:Vidio: Nkpughe nke Madonna "ụbọchị atọ nke ọchịchịrị" na nkọwa ya
Ọzọ Post → Post ozo:Uzo ato ndi mo-ozi ndi nlere bu ihe nlere nye ndi nchu aja